Andiana lahatsary fanadihadiana maro manasongadina ny ady atrehan’ireo vehivavy mpikatroka any Vietnam · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2019 11:35 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Français, Ελληνικά, Português, عربي, 繁體中文, polski, Español, Română , 日本語, English
Pikatsary avy amin'ny lahatsary ‘Tafatafa manontolo niarahana tamin'i Doan Trang’ nakarin'ny 88 Project tamin'ny 10 Mey 2019 tao amin'ny YouTube.
Andiany iray vaovao ahitana tafatafa no manasongadina ireo fomba fijery sy ady atrehan'ireo vehivavy tafiditra ao anatin'ny fikatrohana ho an'ny zon'olombelona any Vietnam..
Namokatra ny lahatsariny voalohany natao andiana tafatafa momba ireo resadresaka amin'izao fotoana izao iarahana amin'ireo vehivavy mpikatroka any Vietnam ny 88 Project, fikambanana manohana ny fahalalahana maneho hevitra any Vietnam. Tao anatin'ilay tafatafa voalohany niarahana tamin'i Pham Doan Trang, mpanao gazety mpanohitra sady mpikatroka ara-politika iray, resahany ny mikasika ireo fanamby atrehan'ny vehivavy amin'ny maha-blaogera sy mpikatroka ho an'ny zon'olombelona azy ireo:
Amin'ny ankapobeny, tsy hajaina ny vehivavy Vietnamiana. Tsy amin'ny fikatrohana ho an'ny demokrasia irery ihany fa amin'ny sehatre rehetra. Ao anatin'ny fikatrohana ho an'ny demokrasia, voa mafy ireo vehivavy mpikatroka satria voatafika bebe kokoa noho ireo lehilahy mpikatroka izy ireo. Voadaroka sy voasetrasetra izy ireo. Tsy kely noho ny an'ireo lehilahy mitovy aminy ny asan'izy ireo. Fa ny zavatra matetika azon'izy ireo avy any amin'ny olon-kafa dia fangorahana. Tsy fanjana izany amiko.
Mitantara zava-nitranga mikasika ny herisetran'ny polisy izay niteraka ratra maharitra teny amin'ny tongony roa.
Nandritra ny fihetsiketsehana iray nikendrena hiarovana ireo hazo sy ny tontolo iainana tany Ha Noi, nanafika ahy izy ireo ary nanapaka ny tongotro roa.
Noho ireo fanafihana ara-batana matetika ataon'ny lehilahy voakarama, vehivavy maro hafa no tena naratra mafy , isan'ireny ilay mpikatroka ara-tsosialy sady blaogera,Tran Thi Nga, izay manefa sazy sivy taona an-tranomaizina ankehitriny.
Voarakitra sy navoaka tao amin'ny Youtube ny fanafihana an'i Tran Thi Nga, niaraka tamin'ny fandraketana an-tsary ny fitondràna azy ho any amin'ny hopitaly niaraka tamin'ireo zanany kely roa .
Araka ny tatitry ny fianakaviana, sady lasibatrana herisetra ara-batana sy ara-tsaina i Tran Thi Nga taorian'ny nisamborana azy, nahazo fandrahonana ho faty sy daroka avy tamin'ilay mpiray efitra taminy.
Pikatsary avy amin'ny lahatsary ‘Tafatafa manontolo niarahana tamin'i Doan Trang’ nakarin'ny 88 Project tao amin'ny Youtube tamin'ny 10 Mey 2019
Na eo aza ireo fanamby atrehin'ireo vehivavy mpiaro ny zon'olombelona ,na ao anatiny na any ivelan'ny fonja, milaza i Pham Doan Trang fa mety misy tanjona ambony kokoa rehefa tafiditra ao anatin'ny fikatrohana ara-politika ny vehivavy.
Ao anatin'ny fitondrana jadona iray, tsy misy manana fahalalahana, indrindra fa ny vehivavy, ambony be raha oharina amin'ny lehilahy ny tsy fahampian'ny fahalalahan'izy ireo. Satria tsy lasibatry ny fitondrana fotsiny ihany ireo vehivavy raha politika no resahana, fa lasibatry ny tsy fitovian-jo eo amin'ny lahy sy y vavy ary ny fameran-tena ihany koa izy ireo. Mametra tena ny vehivavy amin'ny fieritreretana hoe tsy natao ho an'ny asa ara-politika izy ireo. Fa ho an'ny lehilahy irery ihany ny politika.
Tokony hieritreritra isika fa tsy amin'ny jadona na ho fanafahana an'i Vietnam amin'ny jadona irery ihany ny adintsika. Ady mba hanafahana antsika amin'ireo fanerena ideolojikan'ny fitsarana an-tendrony ataontsika amin'ny tenantsika hatramin'izao.
Araka ny rakitry ny 88 Project, gadra mihoatra ny 200 noho ny fanehoankevitra no misy any Vietnam ankehitriny, izay ny 30 amin'ireo dia fantatra fa vehivavy.
Matetika samborina sy ampangaina noho ny “hetsika mikendry ny hanongam-panjakana” na “mitarika hetsi-panentanana manohitra ny fanjakana” ireo blaogera sy mpanao gazety. Araka ny Amnesty International, nitarika famoretana tsy nitsaha-mitombo natao tamin'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fikatrohana am-pilaminana nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay ny governemanta Vietnamiana.
Tokony havotsotra amin'ny fiandohan'ny volana Aogositra i Nguyen Dang Minh Man, mpaka sary fanao an-gazety sady vehivavy izay nanefa ny sazy an-tranomaizina ela indrindra hatreto.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny vehivavy mpikatroka any Vietnam, manasongadina ny fahafahan'ireo vehivavy mahaleotena ao anatin'ny fiarahamonina Vietnamiana i Pham Doan Trang.
Raha toa ka manana fahalalahana ny vehivavy dia afaka ny hivoatra be ary hahita fa tena tsara anie ny fiainana, sy hoe maro ny safidy, maro ny fahafahana manao zavatra, maro ny zavatra azon'izy ireo atao, hita ary hampandrosoana mba handraisana anjara amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina sy ny zanakolombelona.
Jereo ilay tafatafa: